Vincent Kompany Oo Virgil Van Dijk U Soo Xushay Difaac Abid Ugu Fiicnaa Premier League Iyo Jamaahiirta Man City Oo Ka Cadhooday. - Gool24.Net
Vincent Kompany Oo Virgil Van Dijk U Soo Xushay Difaac Abid Ugu Fiicnaa Premier League Iyo Jamaahiirta Man City Oo Ka Cadhooday.
Garoonka Etihad Stadium waxaa caawa loogu balansan yahay kulan sharafeedka ay xidigo magac wayn ku leh kubbada cagtu ay kabaha ugu xidhan doonaan sidii ay u sharfi lahaayeen wax qabadkii Vincent Kompany ee kooxda Manchester City.
Laakiin ka hor kulankan waxa uu Vincent Kompany sheegay difaaca uu u arko in uu yahay kii abid ugu fiicnaa horyaalka Premier league waana hadal ayna jeclaysan doonin jamaahiirta kooxda xuska u samaynaysa ee Man City.
Vincent Kompany oo isaga laftiisa lagu daro difaacyadii dhexe ee taariikhda Premier League ugu fiicnaa ayaa tilmaamay in Virgil Van Dijk uu yahay difaacii taariikhda horyaalka Premier league ugu fiicnaa.
Vincent Kompany ayaa iska garab maray difaacyadii kooxda Manchester United ee Rio Ferdinand iyo Vidic oo lagu daro kuwa ugu fiicnaa ee soo maray Premier league.
Haddaba hadalka Vincent Kompany ayaa noqday mid ay markiiba warbaahinta England iyo aduunku ay ka waramayaan iyada oo waliba loo arko in ayna taageerayaasha Man City hadalkan jeclaysan doonin.
Vincent Kompany oo ka hor kulanka xuskiisa ee Etihad Stadium hadlayay ayaa yidhi: “Anigu waligay iskuma dayo in aan cid isbarbar dhigo, safarkaygu wuu ka duwan yahay, waxaa waajib igu ahayd in aan la soo tacaalo waxyaabo kala duwan ee in aanan ciyaarin, sidaa daraadeed taas ayaan la soo tacaalay si aan muhiim ugu noqdo kooxdayda”.
Intaas kadib Vincent Kompany ayaa Van Dijk u soo xushay difaacii ugu fiicnaa ee Premier league soo maray wuxuuna yidhi: “Waxaan xidiga ugu fiican u soo qaadanayaa Virgil Van Dijk, isagu muu ciyaarin waqti u dher sida Terry, Ferdinand kuwaas oo waqti dheer joogay, laakiin calamaadihii uu muujiyay sanadihii ugu danbeeyay ayaa tusinaya in haddii uu waqti dheer joogi lahaa uu halka ugu saraysa waqti dheer joogi lahaa”.
Sabab cad ayuu Company u adeegsaday in uu ku qeexo go’aanka uu Van Dijk ugu soo doortay difaacii Premier league ugu fiicnaa wuxuuna yidhi: “Liverpool-shii ka horaysay Van Dijk gabi ahaanba way ka duwanayd, sidaa daraadeed midkaas waan siinayaa”.
Qaar ka mid ah taageerayaasha ayaa ka falceliyay hadalka Company waxay ku doodeen in Van Dijk aanu xataa soo gali karin shanta difaac dhexe ee ugu fiicnaa Premier League.